Semalt Inokurudzira Kushandisa Yakagadziriswa Data Kuti uwane Mamwe Clicks
MunaGunyana wa1999, Google yakaburitsa chimwe chikamu kune yayo yekutsvaga injini inoshandira mumaseti edatha. Izvo zvinotipa zvinhu zviviri: sosi yakajeka yedatha yakakosha kune avo vanotsvaga kusimbisa zvavanotaura uye imwe ingangoita injini yekutsvagisa injini yekushandisa. Chero chii chaungavavarira kuita, tine mhinduro kwauri.
Chii chinonzi Yakagadziriswa Dhata?
Data yakarongeka imhando inodiwa neGoogle paunenge uchitsvaga dhatabheti. Iyo yedhesi yesangano dhizaini iri pane schema.org , kwaunogona kuenda kuburikidza neyakagadzirirwa schemas kuti uwane dhairekitori chimiro kuti ikwane yako chikamu. Kana izvi zvikaita sezvakanyanya, isu tichaenda mune zvimwezve ruzivo gare gare. Kutanga, pazasi pane rondedzero yeshoko ratichave tichishandisa.
Schema - Chikamu chezvivakwa chinoshanduka zvichienderana nenyaya yakurukurwa.
Izvi zvinosanganisira vents, mabasa ekugadzira, zvigadzirwa, uye nzvimbo.
Dataset - Ruzivo rwakabatana nesinamato.
Mabasa ekugadzira anozove nemunyori, mupepeti, uye zvisingabvumirwe.
Microdata - Iyi ndiyo mabhigi anoshandiswa mu HTML kurondedzera mhando yedhatabheti.
Iye “Muvambi” pachako ingangodaro tag
Kumaka kumusoro - Kana iwe uchiisa iyo microdata kune yako dheti
ITEMSCOPE - Iyo HTML tag yekushandisa schema
ITEMTYPE - Iyo HTML tag yekutsanangura iyo mhando ye schema
ITEMPROP - Iyo HTML tag yekutsanangudza chivakwa chechinhu ichocho.
Itemprop = "munyori"
Kana iwe usingazivi chinhu nezve HTML, nzwisisa kuti tsanangudzo nhatu dzekupedzisira dziri mukati mekodhi. Iwe uchavaona kazhinji kana uchifunga madheti uye schemas. Haufanire kunzwisisa HTML kuti unzwisise ichi kutumirwa.
Kana iwe ukanzwisisa HTML, iwe uchaona idzi sehwaro hwekushandisa schema kune yako kodhi. Schemas ichakubvumidza iwe kuronga zvako zvemukati kuti zvizivikanwe neGoogle injini dzekutsvaga sedhata. Iyi schema application ichaunza traffic kune webhusaiti yako kana ikabatwa nemazvo.
Ini Ndinoshandisa Sei Iyi data pane Webhusaiti yangu?
Tichadzokera pakushandisa zvemukati senge dhata gare gare mune blog. Kutanga, tinouya kuzoshandisa iyi injini yekutsvaga sesimba rekuti iwe ushandise kune yako webhusaiti. Zviri nyore kwazvo kudzoreredza data iro ratovepo pane kugadzira yakasarudzika data.
Ndirini Kana Ndichinetseka Nezve Copyright?
Kana iwe uchayeuka yako koreji mazuva, kutaurisa yako masosi ndiyo yakavanzika yekushandisa data kukwikwidza mapepa ako. Kana zvasvika pakugadzirwa kwemukati, mizhinji yemirairo yakafanana ichashanda chero iwe uchivapa icho chikwereti. Semuenzaniso, ini handina kukwanisa kukuudza kuti ndakanyora yekutanga nyaya inozivikanwa nehunyorwa pafotokopi yenyaya IT yaSteven King.
Google Dataset yekutsvaga inosanganisira yekutsvaga iyo inoita kuti iganhurise nekushambadzira uye kusashambadzira. Kana chinangwa chako chiri chekunyora blog inosanganiswa neiyo brand kuti itengese kutengesa, chikamu ichi chichave chakakodzera iwe. Kana iwe usina chokwadi, inzwa wakasununguka kusvika kune inoenderana blogger kana kambani. Vachaonga kuongorora kwako-mukati, uye kunogona kuzokuvhurira mumwe mukana.
Chii Chandinofanira Kutsvaga paGoogle Dataset?
Izvo zvaunofanira kutsvaga zvinoenderana nechero yako. Ngatitii urikuyedza kuita poi pane dzisina kubatsira CEO. Iwe unogona kufunga kuti ivo vanobhadharwa zvakawandisa. Saka iwe unotsvaga yekupa basa rekubatsira nemari shoma. Asi kushandisa mukana we "musoro wenyaya" kunobatsira iwe kudzikisira. Nhoroondo iri mumufananidzo pazasi.
Ngatimboti iwe unoda tafura ine runyorwa rwezvinobatsira zvinoita basa muUK. Iwe unogona zvakare kugadzirisa data nenzira. Mune ino kesi, iwe sarudza iyo fomati sarudzo uye sarudza "tafura." Kune ino, nyatsoziva nezve iko kushandiswa uko izvi zvinoshanda.
Kune Zvimwe Zvese Zviripo Kana Uchishandisa Google Dataset Kutsvaga?
Vanhu vanochengeta ziso paGoogle bhulogi ndivo vanokurumidza kuwana ruzivo. Iwe unogona zvakare kutevera blog yaSaltalt , uyo achange achichengetedza neziso rakatarisa pane izvi zvinoshandura SEO mamiriro. Google zvakare ine FAQ .
Ipo Google yakaunza chinhu chinonakidza kune yayo yekutsvaga injini mamiriro, chinangwa cheSemalt chinosara kukuunza iwe pamusoro penzvimbo iyi. Muchikamu chinotevera, tichaenderera kuburikidza nemashandisiro amungaita dheti yako kune ino yekutsvaga injini. Kushandisa iyi data yakarongedzwa ndiyo mukana mutsva kune avo vanotsvaga kuti vawedzere kuoneka kwavo uye vawedzere kubatwa.
Maitiro Ekumusoro Up ako eDataset mapeji
Kuita kuti zvinhu zvive nyore, tiri kuzokupa nhanho-nhanho nhanho yekukubatsira iwe nekumaka kumusoro kwemapeji ako yedata. Isu tichakupawo iwe zviitiko zvishoma izvo zvichakubatsira iwe munzira yako. Pazasi pane rondedzero inotsanangura izvo zvatichange tichienda pamusoro.
Tsanangura yako musoro (schema).
Ziva izvo zvinokodzera sedhawati.
Tsvaga yakakodzera uye yakasarudzika data.
Gadzira iyo HTML inodiwa.
Kutsanangura wako Musoro
Kutsanangura schema yako ndiyo yekutanga nhanho mukugadzira chero data yakamiswa. Chinyorwa cheSchemas chiri pane schema.org. Panogona kuve ne peji rimwe chete pa schema. Saka iwe haudi kuisa peji remberi kune schema, iwe waizongosanganisira blog blog.
Kune izvi, tichave tichishandisa butchery yemuno. Paunenge uchiita imwe tsanangudzo pane webhusaiti, iwe wafunga kuti iwe unoda kuzosarudzika seyenzvimbo pane yako dhata. Semuenzaniso, ngatiti iwe unoshandira mumwe munhu kuti aunganidze ruzivo pamusoro pemutengo webeef tendloin mutaundi rako. Nekuita tsvagurudzo, iwe uchave kukwanisa kushandisa iyi dhata kuvanhu vari kutsvaga izvi munzvimbo yako.
Izvi Zvinondibatsira Sei?
Uku kuedza kunowedzera webhu traffic uye kunopa webhusaiti yako kuti inowedzera seyakavimbika sosi yeruzivo. Iwe unogona zvakare kushandisa ruzivo urwu mukushambadzira kwemangwana. Iwe unogona kutaura kuti iwe une yakawanda isingadhuri nyama yemhando nyoro kana uchienzaniswa nemazana anotevera emabhuru muguta rako. Ita shuwa kuremekedza vamwe vari mukati mekushandisa ruzivo urwu.
Iva NeCherechedzo Izvo Zvinokodzera SaDhatasiti
Nzira yakanakisa iyo munhu anogona kuwana nezve izvo zvinokodzera sedheti ndeyekutsvaga. Google yekuvandudza FAQ ine zvakare mienzaniso mishoma , asi isu tichada kuwedzera pane iyo rondedzero. Mumwe muenzaniso wandinoda kutarisa nezvawo "chero chinhu chinoita senge dhatabhesi." Yekushandisa yekutsvaga yeGoogle ine zvinoshamisa zvine simba sekureba iwe uchigona kubata dheti.
Tichitora muenzaniso wedu wapfuura, tinokwanisa kunyora "yakanakisa nyama yemadhorobha muguta" yatagadzira uye toishandisa tafura yepamusoro, tafura yakavakirwa webhusaiti, .pdf, a .xml, a .docx, uye vashoma vamwe vanogona kuverenga neGoogle's AI. Unogona kushandisa kunyange yakakodzera mufananidzo. Bar graphs uye mutsara magirafu ari maviri anobatwa nyore naExcel.
Datasets dzinokoshesa ruzivo runouya kuburikidza zvakachena uye nehunyanzvi. Kana webhusaiti yako yakagadziriswa kuti igadzire iyi tafura uye dhatabheti, Google ichashandisa ruzivo irowo kuti riwedzere kubvunza kwekutsvaga. Zvakare, vashanyi vanogona kuve nemhando dzakasiyana dzekudzidza. Kugadzira zvemahara zvemukati mune dzakasiyana siyana midhiya mafomu zvichabatsira kuti muverengi anzwisise pfungwa yako.
Kutsvaga kwakasarudzika uye kunobata Data
Iko kiyi yeSEO uye dhetitsiki vari kugadzira chimwe chinhu chakasarudzika chemukati chinofukidza mazwi akakosha mune imwe niche. Izvo zvakafanana zvinoshanda kana zvasvika kune schemas uye dheti. Nekugadzira chimwe chinhu chine kujairika chimiro, zvinoita kuti zvinhu zvive nyore kuti vaverengi vatore. Yese yakasarudzika data ndiyo ichaita kuti varambe vari pedyo.
Kune shopper butcher, angangofona achitenderedza kana kuenda kune akati wandei mawebhusaiti kuti ape data. Dhata inoda kuyerwa uye kuomeswa. Mune ino kesi, zviri nyore sekutarisa nekufona sezvazvinodiwa. Kana iwe uchitsvaga vanhu maonero ebhizinesi rako, vape nhanho kubva kune imwe kusvika kune vashanu. Iwe unogona zvakare kushandisa yeruzhinji kuongorora kuGoogle, asi data harisi iro rakareruka kuunganidza.
Iyi ruzivo inobatsira iwe kuzadza dhatabhesi yako. Nekudaro, zvimwe zvinoshandiswa zvinosanganisira kuvandudza kwebhizimusi uye kuziva kwezvinhu. Kana iwe ukaita ongororo, chete kuti uone kuti iwe unoshaya mune imwe nzvimbo, iwo mukana wekuvandudza. Ungangoda kuchinja mutu wako kana uchida kuzadza dhatata.
Gadzira iyo HTML Inodiwa
Kugadzira HTML chirongwa chetekinoroji chinogona kutora nguva yakawanda. Mabara ataura pamusoro apa anogona kunge achishungurudza kana iwe usina ruzivo neHTML kana mutauro wechirongwa. Iwe ungashuve kuroja imwe tarenda nyowani kuti ikubatsire.
Tarenda yakadai iri pamawebhusaiti ekutenderera. Mienzaniso inozivikanwa yeiyi inogona kusanganisira Toptal, Upwork, uye Freelancer.com. Edza uye uwane mumwe munhu akambowana ruzivo mumunda kare. Kana vasati vanyora dhairekitori pakutanga, vanogona kunge vasingazive zvavari kuita. Kana ivo vachiziva zvavari kuita, ongorora chako chinangwa schema's ITEMPROPs kuitira kuti iwe ugone kuongorora iyo HTML nerumwe ruzivo.
Vazhinji freelancers vanounzawo maonero matsva kukambani yako. Ive neshuwa kubatisisa kune chiono chekambani yako. Uyezve, ma freelancers anogona kukanganisa ne SEO yako. Ive neshuwa kubvunza Semalt kana iwe uine chero mibvunzo nezve zvatinokurudzira pamusoro pekushandisa dhetiti kune yako webhusaiti.
Iko Kukonzera Dataset Kuisa Peji Rangu?
Mhinduro kumubvunzo uyu zvinoenderana nechinangwa chako chose. Kugadzira webhusaiti, kana bhurogu, yakavakirwa padenderedzwa rine ruzivo uye zvinyorwa zvine zvinyorwa zvakasarudzika zvinotora basa rakakura. Mabhizinesi madiki anogona kupedzisira aisa mari yakawanda pamusoro pezvirongwa zvavo. Chikamu chenguva, kushanda nesimba uye mari chinogona kutora chikero.
Nekudaro, kugadzira hwaro hwemashoko kutenderedza bhizinesi rako iro rinowanzobatanidzika kune yako webhusaiti kune yakasimba blog blog. Kushandisa ruzivo urwu sedhata kunowedzera kutendeka kwako. Google's Database Kutsvaga kwave kuchikura huwandu hwekuchinjisa kwemapoka mazhinji ezvidzidzo zvekutsvaga semugumisiro weizvi. Kuisa zviri mukati mako pamwe neizvi kunokupa iwe kukurumidza.
Chidzidzo Kuongorora kweGoogle's Dataset Injini
Iwe unogona kunge uchifunga kuti izvi zvakavakwa zviri nani kumapoka ezvidzidzo uye mawebhusaiti-akavakirwa mawebhusaiti. Nekudaro, imwe kambani yeJapan inonzi Rakuten yakashandisa sevhisi iyi kusimudzira Rakuten Recipies. Iko kushandiswa kwe data yakarongedzwa kwakawedzera yavo yewebhu traffic ne 270 muzana.
Aya maitiro haagaro kutungamira kumashure pakuzviwana iwe uri mune yedhisheni yekutsvaga injini. Dzimwe nguva zvinokutungamira kuti uve pakati peanoratidzwa sniper. Featured snippets ndechimwe chinhu chatichazokurukura zvakadzama mune imwe blog.
Dhata Yakagadziriswa Inondibatsira Sei Kusvika kuGoogle Pamusoro?
Kumakambani mazhinji, data rakarongeka inzira yekusimudzira yako SEO nekushandisa dhatabheki dzasati dziripo uye mafomu. Kune vamwe vanogona kuongorora yakakura ye data, iwo mukana. Nekuita tsvagiridzo uye nekuziva maitiro ako webhusaiti inoenderana newebhu ino, unozvipa wakanyanya mukana. Kuburikidza nehurukuro naSemalt, isu tichaona kana yako webhusaiti ichave yakakodzera kushandisa izvi kusvika kune Google yepamusoro.